"Waxaan marnaba fileyn in laga yaabo in wax qalad ah" - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · "Waxaan marnaba fileyn in laga yaabo in wax qalad ah"
"Waxaan marnaba fileyn in laga yaabo in wax qalad ah"Ka dib markii ay weerar ku saabsan burcad badeeda television laga shakisan yahay in Malmö shalay, kun oo macaamiisha saameeyeen. Baxsan dealer a at Möllevången joogay kuwo badan oo niyad.
Shirkadda ku salaysan Malmö tuhunsan yahay iibinta karo jebinta copyright sanduuqyada dhigay-top la kanaultbud badan caalamka oo dhan. Yesterday la damiyay channels hoos ka dib markii booliska firdheen ka dhanka ah shirkada, wax dhibto iyaga sannad walba bixiyaan kumanaan for line channel.
- Waxaan dareemayaa xanaaqsan. Waxaan soo iibsaday oo aan box laba toddobaad ka hor iyo haatan ma shaqayn doonaan. Waxa ay balan qaaday adeegga saacad, laakiin hadda jawaabtu waa maya, ayaa sheegay Rabbiga.
Waxa uu lacag ku dhow 3000 karoon sanduuqa iyo mid ka mid ah macaamiisha badan oo dukaanka ku koreen soo baxay at Möllevångstorget maanta.
Qaar badan oo doonayay in ay ka caban
Shirkadda ku salaysan Malmö waxay bixisaa ku saabsan 2,000 channels TV, ugu horrayn macaamiisha Carabi ku hadla ee Sweden. sanduuqa waxaa lagu gadaa dukaamo badan ee Malmö, oo ay ku jirto shirkadda ee dukaanka u gaar ah in uu ahaa u xiran yihiin maanta.
Baxsan ahaayeen dhowr qof kuwaas oo keenay sanduuqyada set-top ay cabashooyinka. Dad badan ayaa su'aal ka iyo hadlayaan waxa ku dhacay meel ka baxsan dukaanka.
- Waxaan bixisay iyo sameeyey toosan oo annaga, waxa ay tahay in aan hadda ku samayn? Waxayna layaabeen.
xadgudubyada copyright looga shakiyay
Waxa ay ahayd shalay in kumanaan dad ah la ATN-box helay channels TV ay yeeley Dabool ka dib markii booliska gjrot olole ka dhan ah shirkadda.
Saddex nin oo ka shirkadda ka danbeeya sanduuqa la xiray shaki la jebinta copyright.
Mohamed Gazi ka shaqeeya dukaanka albaabka soo socda iyo sidoo kale halkaas oo samayn hadal ah. Laakiin Mohamed Gazi waa la yaabay.
- Wuxuu ahaa qof wanaagsan oo had iyo jeer sameeyey wax sax ah. Waxaan la yaabay marka aan maqlay waxa dhacay, ayuu yidhi.
- In xilliga qaboobaha, waxa ay noqon doontaa adag tahay marka aad gudaha dheeraad ah ku fadhiisan. Yesterday aan huleeshay dhoobo channel iyada oo computer ah laakiin waa garoocad aad u badan, ayaa sheegay in mid ka mid ah aan la hadleynaa.
Mohamed Qadoura iyo xaaskiisa Sabriah Hadiri ee Malmö ayaa sanduuq.
- Kids My mid leedahay, Xataa deriskayga aad mid leedahay, saaxiibaday leeyihiin hal iyo waxaan ku jiray oo dhan aad u la yaabay, in sanduuqa shalay ku guuldareystay.
- Qaar badan oo loo yaqaan agagaarka midba midka kale iyo yaabay waxa dhacay, ayuu yidhi.
Wuxu qabaa, in qof kasta waa la yaabay, in shirkadda lagu tuhunsan yahay isagoo wax sharci darro ah ku sameeyey.
- Sales ayaa si cad iyo si sharci ah ku jirtay, calaamadaha ayaa meel walba la oo waa shirkad loo yaqaan weyn. Waxaan Marna ma fileyn in laga yaabo in wax qalad ah, ayuu yidhi.
ilaha wararka muhiimka ah
channels TV ayaa ay muhiim u yihiin dadka qaba qoyska iyo qaraabada tagay dalalka kale. Mohamed Qadoura ka dhigan tahay in goobaha ee Bariga Dhexe si fiican u dhawray ka channels kuwanu waa meel oo ku qotomaan ee degaanka.
- Gaar ahaan marka ay jirto dagaal iyo xasillooni ee Bariga Dhexe sida ay hadda tahay, waxaan u baahan nahay macluumaad badan oo. Waa sida samaynta telefoon ah oo weydii haddii oo dhan waa sidoo qoyska, ayuu yidhi.
- News channel kasta waxay leedahay midab siyaasadeed iyo warar la xaglo kala duwan. Waxaa muhiim ah in aad u badan ayaa si aad u hesho xaglo badan oo ninna waa obereonde, ayuu yidhi.
- Shirkadda ayaa lagu qabtay bilayska, laakiin waxaan kuwaas oo ay ka bixisay lacag badan for this, sida waxaan qabano? Waxaan ka fariistay iyo laba kun oo sano ah waa lacag aad u badan noo, ayuu yidhi.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/vi-anade-aldrig-att-det-kunde-vara-nagot-fel-111.11.2016. 21:01	Categories